🥇 ▷ iPhone 5s iyo iPhone 5, waxay aqoonsadaan shaqooyinkooda si looga fogaado khayaanada ✅
iPhone 5s iyo iPhone 5, waxay aqoonsadaan shaqooyinkooda si looga fogaado khayaanada
Suuqa gudaheeda waxaa ku yaal telfoonno iPhone 5s iyo iPhone 5 ah
In kasta oo qaar badani u muuqan karaan wax aan caadi ahayn, haddana isku shaandhayn isku mid ah aaladaha sida iPhone 5s ama iPhone 5 ayaa jira. Xaqiiqdii, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo ku dhacaya “dabinka” oo dhamaadka iibsashada mid ka mid ah moodooyinkaan Shiinaha ah, oo lagu iibiyo asal ahaan. Xaqiiqdii, waxaa jira dad badan oo ay ku adag tahay inay aqoonsadaan isku-soo-xoori aaladda asalka ah, xitaa iyagoo ayagu ku haysta gacmahooda, maxaa yeelay moodooyinkan ayaa daryeela faahfaahin kasta oo ugu dambeeya. Sababtaas darteed waxaan kugu tageynaa liistada tafaasiisha si loo tixgeliyo si looga fogaado nooc kasta oo khayaano ah.
Waa muhiim in la tixgeliyo dhowr arrimood ka hor intaadan gadan iPhone 5s / 5 onlayn
Haddii aad isku dayeyso inaad ku iibsato iPhone 5 / 5s websaydhka, mid ka mid ah waxyaabaha badanaa dhaca ayaa ah inaanan hubin halka ay aaladdaasi ka timid, sababtaas awgeed waa inaan fiiro gaar ah siino kahor intaadan dhameystirin iibsashada. Marka waa inaad maskaxda ku haysaa in haddii aad qalabka ku soo iibsato goob aamin ah ma aha inaad wax walaac ah ka qabtid, sida bogagga internetka sida eBay, haddii aad kahesho iibiye leh codad badan oo togan, way adag tahay inaan kaa iibiso muuqaal hase yeeshee, haddii kiiskaagu aanu ka mid ahayn kuwan, waxaa muhiim ah inaad ka fiirsatid dhawr arrimood.
Marka hore, haddii aad leedahay suurtagal inaad aragto aaladda ka hor intaadan iibsan, waxay noqon laheyd mid xiiso leh inaad taabato oo hubiso haddii tayada agabku ay la mid yihiin tan dhabta ah ee iPhone. In kasta oo qaar badan oo ka mid ah saacadaha la sameeyay ay ka samaysan yihiin bir, ma aha wax adag in la sheego kala duwanaanta tayada qalabka, haddii aad waligaa fursad u lahayd inaad mid ka mid ah aaladahaan asalka ah gacanta ku dhigto. Haddii dhinaca kale, aaladda laga sameeyay caag, markaa waa inaadan shaki ku jirin in aaladda aysan asalka ahayn.
Fiidiyow muuqaal ah ‘iPhone 5s clone’ oo laga iibiyay Talyaaniga
Hoos waxaad ka arki kartaa muuqaal fiidiyow ah oo muujinaya xirnaanshaha meheradda iPhone 5s. Miyaad aqoonsan tahay kala duwanaanshaha u dhexeeya midka hore?
Tayada qalabka iyo tafaasiisha aaladda, waxay ku kala geddisantahay isku xirnaanta iPhone 5s / 5 iyo kan asalka ah
Marka laga soo tago tayada qalabka ama goobta aaladda laga iibsado, waxaa jira qodobo kale oo ay tahay inaan tixgelinno markii aan aaladda iibsaneynno websaydhka, waxa ugu horreeya ayaa ah inay muhiim tahay inay soo diraan sawirro iyo aalad Fiidiyow, si loo hubiyo hawlgalka iyo xaaladda aaladda su’aashu ka taagan tahay. Waa inaan sidoo kale xisaabta ku darsannaa qodobo ka sooci kara kabaha Shiinaha iyo kan iPhone 5 / 5s ee asalka ah.
Kaameera: Haddii aad rabto inaad iibsato iPhone 5s, kaameeraha waa inuu awoodaa inuu duubo fiidiyow leh mooshin gaabis ah, intaas waxaa dheer inaad awoodo inaad sawirro badan ka qaaddo adigoo riixaya ama qabanaya badhanka si looga saaro. Hab-dhiskaan ugu dambeeya ayaa sidoo kale ku jira iPhone 5, laakiin kuma joogo saacadaha.
Durbaan: Inta badan saacadaha shaashadaha batteriga qalabka si fudud ayaa looga saari karaa, halka iPhonekii asalka ahaa tani macquul ma aha, illaa aan u isticmaalno qalab khaas ah tan. Si kastaba ha noqotee, maahan muuqaal aad u muhiim ah maadaama ay jiraan shaashad ‘imaan’ ‘oo xiran’, dhinacan, sida iPhone-ka Apple.
Nambarada taxan: Ha isku halleynin nambarada taxanaha ah maxaa yeelay kuwan waxaa laga soo qaadan karaa iPhone asalka ah.
Fiidiyoowga IPhone ee ku xiran iTunes: Haddii aad shaki badan ka qabto, waxaad dalban kartaa fiidiyaha fiidiyowga ee ku xiran iTunes, aaladda waa inay ku soo muuqataa shaashadda oo ay ku jiraan dhammaan ficilada. Waa muhiim in maskaxda lagu hayo in iTunes uusan waligiis aqoonsan doonin isku-sooca.
Baakadaha: In kasta oo aaladda laga yaabo inay lahaato nooc la mid ah agabyada iyo dhismaha aaladaha asalka ah, xirmooyinka wax lagu xirayo maaha kuwa ay AppleReem u isticmaasho in dadka reer Californiansku u isticmaalaan agab muuqda. Intaas waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in kartoonnada ay ku jiraan tilmaamaha ay leeyihiin carrab u oggolaanaya in si sahal ah looga saaro sanduuqa, haddii uusan laheyn waxay noqon laheyd isku xirnaan.
Sawirka Isticmaalka: Codso shaashadda shaashadda Isticmaalka, saacadaha cusub ama shaashadda qaabaysan, waxay guud ahaan leeyihiin dhammaan meelaha bannaan, halka iPhone-ku aysan tani suurtogal ahayn waligeed sababtoo ah booska ay ku shaqeeyaan nidaamka hawlgalka. Tusaale ahaan, 16 GB iPhone 5s ayaa leh 13 GB oo la heli karo.
Awoodda xusuusta: Waa inaad maskaxda ku haysaa inaysan jirin iPhone 5 iyo iPhone 5s 8GB, halka taleefoonada gacanta ay leeyihiin awoodahan.
shaashadda: Shaashadda taabashada ee xarkaha ilkuhu maaha mid dareere ah sida iPhone-kii asalka ahaa.
Taabo Aqoonsi: Clone-ka iPhone 5s kuma qalabeysan yahay ID ID, sidaa darteed suuragal ma ahan, waqti kasta, in lagu furo qufulka faraha. Si aad u ogaato bal inuu leeyahay ID Aqoonsiga ama taabashada, waxaad codsan kartaa inaan kuu soo diro shaashadda barnaamijyada taabashada ee “ID ID”, haddii uusan lahayn, waa isku shaandeyn.
Barnaamijyada: In saacadaha taleefannada qaarkood codsiyada qaarkood ay horay u sii rakiban yihiin oo aan ku imaanin iPhone-ka asalka ah, intaas waxaa sii dheer, astaamaha barnaamijyada qaarkood way ka duwanaan karaan kuwa iOS.
App Store: Bakhaarka arjiga kaydka ah wuu ka duwan yahay kan asalka ah ee macruufka.
Qiimaha waa qodob muhiim ah oo laga fiirsado inta u dhaxaysa iPhone 5 / 5s asalka ah iyo isku xir
Iyada oo tafaasiishahan tixgalinta la siinayo, ka hor intaadan iibsan iPhone 5 / 5s onlayn, meel aad ka shakisan tahay asal ahaantiisa, waa inay noqotaa mid aad ufiican in la garto in la garto inuu yahay mid asal ah ama aalad la adeegsaday. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad tixgelisaa sicirka, haddii ay kugu iibiyaan iPhone 5s cusub wax ka yar 300 €, waxay u badan tahay in aaladdaani tahay isku xirnaan, haddii aysan ahayn isbarasho, haddii ay taasi dhacdo waad heli laheyd ugu fiican ee loogu talagalay ipad. Sidoo kale, waxaan kaaga tageynaa talooyin si aad ugu iibsato iPhone adeegsaday qiimaha ugu wanaagsan.
Miyaad weligaa soo iibsatay iPhone aad u jaban oo iyadu waxay ahayd clone ah? Waxaan rajeyneynaa in talooyinkaan soo noqnoqonayaan aysan dib u dhici doonin